सधैं हाम्रो घरमै भइरहने लसुन यसरी प्रयोग गर्यो भने मानिसलाई बाँझोपन देखि क्या”न्सर समेत रोगमा लाभ मिल्छ । - Seto News
Homeस्वास्थ्यसधैं हाम्रो घरमै भइरहने लसुन यसरी प्रयोग गर्यो भने मानिसलाई बाँझोपन देखि...
सधैं हाम्रो घरमै भइरहने लसुन यसरी प्रयोग गर्यो भने मानिसलाई बाँझोपन देखि क्या”न्सर समेत रोगमा लाभ मिल्छ ।
हाम्रो घरमा 12 औं महिना मिल्ने लसुन पुरुषले यदि दैनिक बिहान खालीपेट एक पोटी खायो भने यसले थुप्रै रोगको उपचारमा मद्दत मिल्दछ। वास्तवमा लसुनमा एलिसिनजस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छन् । यसले थुप्रै स्वास्थ्य समस्यबाट बचाउन मद्दत गर्दछ । राजस्थान आयुर्वेदिक युनिभर्सिटीका सहायक प्राध्यापक डा. अरु दधिचले पुरुषले लसुन खानुका सात फाइदाबारे जानकारी दिएका छन् ।
के हुन् त ती फाईदा जानी राखौ ।
१. लसुनमा सेलेनियम हुन्छ । यसले बाँझोपनबाट जोगाउँछ ।
२. यसमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छन् । यसले सास र मुखको दुर्गन्ध हटाउँछ ।
३. लसुनमा प्रोटिन हुन्छ । यसले सुगठित शरिर पाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
४. यसमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ । यसले कमजोरी भगाउँछ । शरिरले ऊर्जा पाउँछ ।
५. लसुनमा क्याल्सियम हुन्छ । यसले हड्डी बलियो बनाउँछ ।
६. यसमा हुने एलिसिनले ‘फ्याट बर्निङ प्रोसेस’ तीब्र हुने गर्दछ । यसले तौल नियन्त्रणमा रहन्छ ।
रगतका लागि फाइदै–फाइदा
लसुनको उपयोग रगतसँग जोडिएका समस्या निराकरण गर्न निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ, रक्तनलीका भित्ता सफा गर्छ, शरीरमा रगत जाम हुने समस्या हटाउँछ र रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्न पनि यसले काम गर्छ । बच्चा जन्मिने दिन पुगेका महिलाले जतिसक्यो धेरै लसुनको सेवन फाइदाजनक रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
पाचन प्रणालीमा सहयोगी
लसुनले हाम्रो शरीरको पाचन प्रणालीलाई स्वच्छ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । गाउँघरमा अपच भएका बेला वा हुनेजस्तो लागेमा लसुन खाने चलन पनि छ । शरीरका लागि प्राकृतिक एन्टिबायोटिकको काम गर्ने यसले शरीरका हानिकारक जिवाणु नियन्त्रण गर्छ । यसले शरीरका हितकारी किटाणुलाई भने असर गर्दैन ।
कलेजो स्वस्छ राख्छ
यसले कलेजोमा पाचन रसहरूको उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने र बोसो जम्न नदिने भएकाले कलेजोलाई स्वच्छ राख्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको एन्टिअक्सिडेन्ट तत्वले शरीरका कोषहरू नष्ट हुनबाट समेत जोगाउँछ ।
एलर्जी हटाउन सहयोगी
लसुनमा भएको एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिफंगल (ढुसी प्रतिरोधी गुण)ले एलर्जी हुनबाट जोगाउँछ । रुघाखोकी, घाँटीको समस्या र सामान्य अपच हुनेले नियमित लसुन उपभोग गर्दा फाइदा गर्छ ।
नियमित लसुन सेवनले शरीरमा बढ्ने खराब कोलस्ट्रोल घटाउने र असल कोलस्ट्रोल बढाउने काम गर्छ । खराब कोलस्ट्रोलले मुटुको रक्तनली तथा धमनीहरुलाई अवरुद्ध गरेर हृदयघातको समस्या हुने भएकाले लसुनको नियमित सेवनले हृदयघातको सम्भावना पनि कम रहन्छ ।
क्यान्सर प्रतिरोधी क्षमताको जर्मानियम तत्व लसुनमा हुने भएकाले यो क्यान्सरका लागि पनि उपयोगी हुने देखिएको छ । यो तत्व अन्य कुनै पनि जडिबुटीभन्दा बढी लसुनमै पाइने अध्ययनले देखाएको छ ।
लसुनको बहुउपयोगी गुणबाट फाइदा लिन सकेसम्म दिनमा २ वा ३ पोटी उपभोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । तर, फाइदा गर्छ भन्दैमा जथाभावी लसुन खानु भने हुदैन । धेरै लसुन खाँदा छाती पोल्ने, पेट ढुस्स हुने, टाउको दुख्ने, शरीर थाक्ने, चक्कर लाग्ने पनि हुनसक्छ ।